Ukuphupha kwentamo eyaphukileyo Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Phupha ngeNtamo roto
Intamo eyaphukileyo yenzakele kakhulu. Ihlala isenzeka ngenxa yeengozi zendlela apho indawo yentamo nentamo ivezwa ngamandla e-kinetic, umzekelo xa kunokwenzeka ukuba kubekho impembelelo, kunye nokuqhekeka kwamathambo omlomo wesibeleko. Ukuba i-vertebrae ephezulu yahlukile kwisiseko solukakayi, le nto ihlala ibulala umntu ochaphazelekayo. Nangona kunjalo, uninzi lweentamo ezaphukileyo lunokunyangwa esibhedlele, nangona zihlala zinxulunyaniswa nokunye ukonzakala okukhulu.
Intamo eyaphukileyo inokufumana indlela eya kumaphupha ethu njengophawu. Kwakhona, kwenzeka ukuba sifumane ingozi yemoto okanye sifumana ukubetha okunzima entanyeni kwaye siziva ngathi amathambo omlomo wesibeleko aphukile. Xa sivuka kwelo phupha, sihlala sithuthuzelwa kwaye sonwabile kuba ibingengawo amava okwenyani: siphilile kwaye sikhuselekile ebhedini. Kodwa ingathini intamo eyaphukileyo njengophawu lwephupha?
1 Uphawu lwephupha «intamo eyaphukileyo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «intamo eyaphukileyo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «intamo eyaphukileyo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «intamo eyaphukileyo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngamanye amaxesha uphawu "intamo eyaphukileyo" lubonakala ephupheni kuba umntu ekuthethwa ngaye usemzimbeni ngendlela engalunganga. Iinkqubo zakho ze-subconscious eyona ntlungu ibangela imeko yokuphupha.
Rhoqo, nangona kunjalo, intamo eyaphukileyo ephupheni inentsingiselo yokomfuziselo. Iyakushiya abathatha umngcipheko Uhlobo gqiba. Umntu ochaphazelekayo uthambekele ekwenzeni imisebenzi enesibindi kubomi bemihla ngemihla kwaye akasoloko ethathela ingqalelo iziphumo ezinokubakho zokuziphatha kwabo. Izinto ezithile zisongela ukuba zingaphaya kwamandla ethu ekuhambeni kwexesha. Oku kuyinyani ngakumbi kumaphupha apho intamo eyaphukileyo yenzeka khona ngenxa yokungqubana komva kunye nemoto.
Ukuba yingozi yemoto, iphupha elo elingenakubekwa tyala, kodwa apho ukhathazwa yintamo eyaphukileyo, isimboli inokuba njalo iingozi Qaphela ukuba azilawuleki. Kusenokubakho iintshaba kubomi balo mntu kuthethwa ngaye. Kwixesha elizayo elingekude, umntu kufuneka azame ukugcina iliso kumaqhinga eentshaba kangangoko kunokwenzeka.
Olu toliko luyasebenza kwakhona ukuba umntu ekubhekiswa kuye ufumana isibetho entanyeni kwimeko yephupha kwaye waphula intamo. Ngamanye amaxesha iphupha elinjalo likwabhekisa kwimfuno yokwenza Indawo yokujonga tshintsha kwaye uzibeke kwindawo yomnye kwimeko yengxabano.
Uphawu lwephupha «intamo eyaphukileyo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwephupha ngokwengqondo, intamo eyaphukileyo ibonisa ukuba umntu ochaphazelekayo Hayi online ikunye nawe. Ibhulorho phakathi komzimba nengqondo yaphukile kwimeko yephupha. Ngokufuziselayo, oku kunokuthetha, umzekelo, ukuba iphupha lenze ngendlela eyahlukileyo kubomi bemihla ngemihla okanye kwimeko ethile kunaleyo inyanzelwa ziinqobo kunye neenkolelo zakho.
Iphupha elaphukileyo lentamo likukhuthaza ukuba uwamkele lo mbandela kwaye uzokuzibandakanya ngale ndlela.
Uphawu lwephupha «intamo eyaphukileyo» - ukutolika kokomoya
Ngokwendlela yokutolika ngokomoya, intamo eyaphukileyo ephupheni ibonisa a umthwalo onzima phakathi. Kwesi siseko, ibhalansi yengqondo iyaphazamiseka kwaye ukukhula ngokomoya komntu kuthethwa ngaye kuphazamiseka.